Qaybaha Shiinaha ee Mashiinka Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Qaybaha mashiinkaka kooban qaybaha aasaasiga ah ee aaladaha farsamada iyo qalabka kala duwan. Qalabka iyo habka loo adeegsado waxay dhexgalaan heerka ugu sareeya ee naqshadeynta mashiinka hadda jira, agabka, dhalaalida, mashiinada, elektaroniga, koontaroolka warshadaha iyo qeybaha kale.
Horumarinta tiknoolajiyada, qaybaha saxda ah iyo makiinadaha ayaa kaalin muhiim ah ka qaata wax soo saarka warshadaha casriga ah. MESTECH waxay siineysay macaamiisha waxsoosaarka saxda ah ee biraha iyo qaybaha aan birta ahayn sanado.
Waa maxay doorka qaybaha birta saxda ahi ka ciyaaraan warshadaha casriga ah?
Qalabka mashiinka ayaa ah “Mashiinka hooyada warshadaha” . Ku dhowaad dhammaan soo saarista qalabka farsamada lama kala sooci karo ka shaqeynta farsamada. Horumarinta joogtada ah ee tikniyoolajiyadda iyo qalabka, waxaa jira baahi weyn oo loo qabo qaybaha saxda ah, sida duulista hawada, aerospace, gawaarida, caafimaadka, sirdoonka macmalka ah iyo soosaarida qashinka, kuwaas oo dhammaantood aan laga sooci karin taageerada qaybaha saxda ah. Sida loo gaaro wax soo saar tayo sare leh iyo qiimo jaban oo qaybaha saxda ah waa arin ku saabsan warshadaha wax soo saarka mashiinada.
Saldhig bir ah
Qaybaha saxda ah ee saxda ah
Immisa nooc oo habka mashiinka ah ayaad taqaanaa?
Qalabaynta saxda ah waa nidaam lagu beddelayo cabirka ama waxqabadka qalabka shaqada iyadoo la adeegsanayo mashiin wax lagu farsameeyo. Marka loo eego xaaladda heerkulka qalabka shaqada ee la shaqeynayo, waxaa loo qaybin karaa hab qabow, ka shaqeynta kuleylka iyo wax soo saar gaar ah. Guud ahaan waxaa looga shaqeeyaa heerkulka qolka mana keenayo kiimiko ama isbeddel jireed oo ah qeybta shaqada. Waxaa loo yaqaan ka shaqeynta qabowga. Guud ahaan, ka shaqeynta heerkulka caadiga ama ka hooseeya waxay sababi doontaa is beddello kiimikaad ama muuqaal ahaaneed ee qaybta shaqada, taas oo loo yaqaan ka shaqeynta kuleylka. Ka shaqaynta qabowga waxaa loo qaybin karaa jarista iyo ka shaqeynta cadaadiska iyadoo la raacayo farqiga u dhexeeya hababka farsamaynta. Daaweynta kuleylka, foojignaanta, dhajinta iyo alxanka ayaa ku badan shaqada kulul. Goynta saxda ah ayaa badanaa ah iskuxirka kama dambaysta ah ee isku xirka si loo hubiyo saxnaanta qaybaha, sidoo kale waa isku xirka culeyska shaqo ee ugu weyn, isagoo qaadaya in ka badan 60% ka shaqeynta qeybaha farsamada.
Waa maxay sax jarista farsamadu?
Jarida Farsamada ayaa ah habka ugu weyn ee loo farsameeyo farsamada, iyadoo la tixraacayo habka looga saarayo qalabka iyada oo loo marayo makiinad sax ah.
Goynta farsamada saxda ah waa nooc ka mid ah mashiinka wax lagu farsameeyo oo leh saxnaan sare. Waxaa jira laba siyaabood oo muhiim ah oo lagu xaqiijin karo saxitaanka qalabka qaybaha:
(1) Mid waa in loo adeegsadaa qalabka mashiinka saxda ah si loo farsameeyo qaybo sax ah, sida mashiinka caajiska iskudhafan, mashiinka mashiinka mashiinka, mashiinka dixiriga ah, Furimaha Qalabka, Mashiinka indhaha, saxsanaanta sare ee banaanka, Furitaanka hob sare Qalabkan mashiinka ayaa ah qalab mashiin khaas ah oo qaas ah, oo si gaar ah loogu isticmaalo ka shaqeynta nooc gaar ah oo qaybo ah, sida geerka, marawaxadaha, fur, qalabka goynta, mashiinka gudbinta saxnaanta sare iyo sanduuqa mashiinka, iwm Qalabkan mashiinka waa kuwo aad waxtar u leh oo sax ah u shaqeynta ujeeddo gaar ah.
(2) Midda labaad waa in la adeegsado tiknoolajiyad magdhow qalad si loo hagaajiyo saxnaanta howlaha qaybaha. Qalabka mashiinka xakamaynta jibbaarka ugu muhiimsan waa mashiinka axdi qarameedka CNC, lathe CNC, mashiinka mashiinka CNC, caajis CNC iyo mashiinka shiida, iyo xarunta mashiinada isku dhafan.
Qalabka mashiinka CNC guud ahaan waa aalado guud ahaan aaladaha mashiinka, sababta oo ah adeegsiga teknolojiyadda barnaamijyada kombiyuutarka, waxaa horay loogu sii qorsheyn karaa ka-shaqeynta kumbuyuutarka iyo khaladka, wuxuu leeyahay iswaafajin wanaagsan iyo la-qabsi, ku habboon qaab isku-dhafan, noocyo kala duwan oo wax-soo-saar ah. Qalabka mashiinka CNC waa qaali, laakiin waxay ogaan karaan otomaatigga wax-qabadka, waxayna leeyihiin saxsanaan ku-celin soo-celin wanaagsan iyo wax-soo-saar wax-soo-saar leh.
Sidee loo doortaa qalabka ku habboon?
Iyadoo la horumarinayo tiknoolajiyada kumbuyuutarka xakamaynta, qalab aad u tiro badan oo mashiinno ah ayaa lagu dhex daray nidaamka CNC, si loo xaqiijiyo otomaatiga wax-qabadka, ka fogow khaladaadka hawlgalka gacanta, iyo hagaajinta saxnaanta iyo xasilloonida wax-qabadka. Sidaa darteed, qalabka mashiinka CNC ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa berrinka qaybaha saxda ah ee wax soo saarka.
(1) Xaqiijinta farsamaynta CNC ee birta ganaaxa wanaagsan waa mid sare, oo leh tayo wax qabad oo deggan;
(2) Waxay qaadi kartaa iskuxirid farabadan oo iskuxidh ah iyo habsami usocodka qaybaha leh qaabab khalkhalsan.
(3) Marka qaybaha CNC ee qalabka ganaaxa la beddelo, kaliya barnaamijka NC wuxuu u baahan yahay in la beddelo si loo badbaadiyo waqtiga diyaarinta wax soo saarka.
(4) Qalabka mashiinka laftiisu wuxuu leeyahay saxsanaan iyo adkeyn, wuxuuna dooran karaa qadarka waxsoosaarka waxtarka leh, iyo heerka waxsoosaarka oo sarreeya (guud ahaan 3 illaa 5 jeer tan qalabka mashiinka guud).
(5) Qalabka mashiinku aad ayuu otomatig u yahay oo wuxuu yareyn karaa xoogga shaqaalaha.
Falanqaynta ganaaxa CNC iyadoo la adeegsanayo aaladaha goynta gaagaaban waa muuqaalka ugu muhiimsan ee qaybaha qalabka ganaaxa. Gawaarida gaagaaban waxay si weyn u yareyn karaan qallooca qalabka, ka dibna waxay ku guuleystaan ​​tayada dusha sare, ka fogaadaan dib-u-shaqeynta, waxay yareeyaan isticmaalka ulaha alxanka, waxayna gaabin karaan waqtiga waxqabadka EDM. Markaad tixgelinayso mishiinka shanta dhidib, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo mabda'a adeegsiga shanta dhidib ee wax soo saarka dhimaya: in la dhammaystiro gebi ahaanba shaqaynta qalabka iyada oo la adeegsanayo waxyaabaha ugu yar ee la jarayo inta ugu macquulsan, laakiin sidoo kale in la yareeyo barnaamijyada, isku haynta iyo waqtiga wax qabashada si loo helo tayo sare oo kaamil ah.
Sidee loo sameeyaa tiknoolajiyad farsamo oo macquul ah?
(1) Marxaladda farsamaynta adag. Si loo jaro inta badan gunnada wax-qabad ee dusha sare ee wax-soo-saar kasta iyo in la soo saaro halbeeg sax ah, tixgelinta ugu muhiimsan ayaa ah in la horumariyo wax-soo-saarka sida ugu macquulsan.
(2) Marxalad-dhammaystir ah. Ka saar cilladaha suurtagalka ah ka dib hawlgalka qallafsan, u diyaari dhammaystirka muuqaalka, waxay u baahan tahay in la gaaro saxsanaanta wax-qabadka loo baahan yahay, hubso kaalmada dhammaystirka ku habboon, iyo dhammaystirka ka-shaqeynta dusha sare ee wadajirka ah.
(3) Marxaladda dhameystirka. Marxaladdan, xawaaraha goynta ballaaran, quudinta yar iyo qoto dheer jarista ayaa loo xushay si looga saaro gunnada dhammeystirka ee ka tagtay geeddi-socodkii hore si loo sameeyo muuqaalka qaybaha inay la kulmaan shuruudaha farsamo ee sawirada.
(4) Heerka mashiinka Ultrafine. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo qiimaha qallafsanaanta dusha sare ama lagu xoojiyo muuqaalka wax soo saarka. Waxaa badanaa loo adeegsadaa waxqabadka dusha sare leh shuruudo sare oo dusha sare (ra <0.32 um).
(5) Marxaladda farsamaynta ganaax-ba'an. Saxsanaanta mashiinku waa 0.1-0.01 micron iyo qiyaasta qalloocinta dusha RA waxay ka yartahay 0.001 micron. Hababka wax soo saar ee ugu waaweyn waa: goynta ganaaxa, muraayadda la shiido, shiidaada iyo nadiifinta.
Sidee loo doortaa waxyaabaha ku habboon qalabka shaqada?
Qalabaynta saxnaanta, ma aha in dhammaan alaabta ceyriinka ahi ay rabi karaan in ay fuliyaan ka shaqeynta saxda ah, qalabka cayriin qaarkood waa kuwo aad u adag, oo ka sarreeya adkaanta qaybaha mashiinka wax lagu farsameeyo, ayaa laga yaabaa inay burburaan qeybaha mashiinka, sidaa darteed qalabkan ceyriinka ahi kuma haboona saxitaanka farsamaynta saxda ah, waxay ka samaysan tahay alaab ceeriin ah oo gaar ah, ama goynta leysarka.
Qalabka ceeriin ee mashiinka saxda ah waxaa loo qaybin karaa laba qaybood, alaabta ceeriin ee biraha iyo alaabta ceeriin ee aan birta ahayn.
Sida walxaha ceeriin ee biraha, adkaanshaha birta miridhku way ka sarreysaa, waxaana ku xiga birta la tuuray, oo ay ku xigto naxaas iyo aluminium jilicsan.
Farsamaynta dhoobada iyo balaastikada ayaa iska leh ka shaqaynta alaabta ceeriin ee aan birta ahayn.
1. Ugu horreyntii, qaybaha waa inay lahaadaan heer xoogaa adag. Codsiyada qaarkood, markay sii adkaanayaan adkaanta waxyaabaha madhan, ayaa ka sii fiican. Waxay ku egtahay oo keliya shuruudaha adkaanta ee qaybaha mashiinnada. Qalabka mashiinku ma noqon karo mid aad u adag. Haddii ay ka adag yihiin qaybaha mashiinnada, lama mashiin karo.
2. Marka labaad, maaddadu waa dhexdhexaad dhexdhexaadnimo iyo jilicsanaan. Ugu yaraan hal heer oo adag ayaa ka hooseeya kan qaybaha mashiinka. Isla mar ahaantaana, waxay kuxirantahay shaqada aaladaha la farsameeyay iyo xulashada saxda ah ee qalabka qaybaha mashiinka.
Marka la soo koobo, weli waxaa jira shuruudo qaar oo loogu talagalay tayada maaddada ee mashiinka saxda ah, ma aha in qalabka oo dhami ay ku habboon yihiin ka shaqaynta, sida alaabada ceeriin ee jilicsan ama adag, tii hore muhiim uma aha in la farsameeyo, tan dambena ma awoodo inay ka shaqeyso.
Mestech waxay siisaa macaamiisha wax soo saar iyo ka shaqeynta qaybaha birta saxda ah. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Mashiinka CNC
Xiga: Caaryada duro caag Medical iyo wax taaj oo kale
Qaybo ka mid ah naxaas
Qaybaha Qalabka Mashiinka Sare
Waxsoosaarka Qaybaha Mashiinka
Qaybaha Mashiinka Loo Baahan Yahay
Sax Qaybaha Mashiinka